Muungaab oo caro kula soo laabtay Muqdisho & dhaqaalihi gobolka oo la xannibay (Xog cusub) | Caasimada Online
Home Warar Muungaab oo caro kula soo laabtay Muqdisho & dhaqaalihi gobolka oo la...
Muungaab oo caro kula soo laabtay Muqdisho & dhaqaalihi gobolka oo la xannibay (Xog cusub)
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa qadar yar ka hor garoonka caalamiga Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degay Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Xassan Maxamed Xuseen ‘’Muungaab’’ iyo xubno ka tirsan Gobolka oo ku wehlinaayay safarkiisa.
Imaanshiyaha Muungaab ayaa ka danbeysay kadib markii Wasiirka arrimaha Gudaha iyo Federaalka Odawaa uu u qabtay inuu Muqdisho kusoo gaaro muddo 24 saac gudaheeda.
Ujeedka Muungaab loogu yeeray ayaa ah in wax laga weydiiyo kiisas la xiriira sababihii xilka looga qaaday oo ay kamid tahay Musuq-maasuq iyo dukumiintiyo la xiriira in inkabadab 60 boos oo u badan goofaf uu ka iibsaday dad aan laheyn sida ay xogtu tibaaxeyso.
Muungaab ayaa sidoo kale la sheegayaa in lagu wargaliyay inuu usoo diyaar garoobo xisaabtan iyo in muddo asbuuc ah uu xilka ku wareejiyo.
Sidoo kale, waxaa si KMG ah hakat loo galiyay dhaqaalihii Gobolka Banaadir, waxaana maamulka Bankiga dhexe lagu wargaliyay inaysan bixin karin dhaqaale ilaa iyo amar danbe, sida aan kasoo xiganay xubno ka tirsan Maamulka Gobolka.
Dhanka kale, Muungaab ayaa iminka looga fadhiyaa in si dhaqsi ah uu ku wareejiyo xilka uu u hayay DF Somalia inkastoo uu codsanaayo in muddo loogu daro asbuuca loo qabtay si uu usoo dhameystiro dukumiintiyada, hadana waxaa jiro cadaadin lagu hayo.